वर्षायाममा देखिने समस्या र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु - Janaswasthya Khabar
You Are Here Home आर्टिकल वर्षायाममा देखिने समस्या र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
वर्षायाममा देखिने समस्या र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
जनस्वाथ्य खबर - July 7, 2021 at 21:58	0
अहिले वर्षायाम चलिरहेको छ । वर्षायाममा खाना र पानीको प्रदुषणका कारण विभिन्न रोगब्याधीहरु फैलिने गर्छन् । त्यतिमात्र होइन वर्षाको पानीमा भिज्दा समेत चिसो, रुघाखोकी देखि लिएर फंगल संक्रमण देखि लिएर विभिन्न छालासम्बन्धि रोग लाग्ने जोखिम हुन्छ ।
वर्षायाममै मलेसिया, डेंगु जस्ता रोगदेखि लिएर टाइफाइड, झाडापखला तथा हैजा जस्ता रोगको संक्रमण पनि उच्च रहन्छ । त्यसैले वर्खाको समयमा आफुलाई स्वस्थ राख्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौति हुन्छ । त्यसैले वर्षायाममा निम्नानुसारको सावधानी अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
हेपाटाइटिस र टाइफाइड:
वर्षायाममा जताततै पानी जमेको हुन्छ । त्यसकारण त्यस्तो पानी जमेको ठाउँमा विभिन्न खालका जिवाणु तथा परजिवीहरु फैलिन्छन् । यी जिवाणु तथा परजिवीहरु मध्ये कतिपय मानव स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हुन्छन् । त्यसकारण निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । वर्षाको समयमा घरबाहिर हिँडडुल गरेर वा कामबाट फर्किएपछि अवश्यपनि नुहाउनुपर्छ । नुहाउँदा एन्टी ब्याक्टेरियल साबुनको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । चिसो कपाललाई आफै सुक्न दिनुहोस् । भिजेको मोजा तथा जुत्तालाई लामो समय सम्म नलगाउनुहोस् । सकेसम्म पानी जमेको तथा हिलोमा कुल्चेर नहिड्नु राम्रो हुन्छ । किनकी यसबाट लेप्टोस्पाइरोसिस जिवाणु सरीरमा प्रवेश गर्ने जोखिम हुन्छ ।
वर्षायाममा ताजा तथा पकाएको तातो खानेकुरा मात्र खानुहोस् । पकाएको खाना चिसो भैसकेपछि वा बँचेको खानालाई पटक पटक तताएर खानु जोखिमपूर्ण हुन्छ । यसो गर्दा पोषक तत्वहरु पनि नष्ट हुन्छन् र विषाक्त पदार्थहरु सिर्जना हुने जोखिम हुन्छ । खानलाई राम्रो ढंगले छोपेर राख्नुहोस् ता की झिंगा छिर्न नपाओस् । धेरै रोगका जिवाणुहरु झिँगा, सांग्ला जस्ता किराहरुले खानेकुरामा सार्ने गर्छन् । खाना खानुभन्दा पहिलो साबुन पानीले हात धुनुपर्छ । काँचै खाने कुराहरु राम्रोसँग पखालेर मात्र खानुपर्छ भने पानी उमालेर मात्र पिउनुपर्छ ।
मलेरिया तथा डेंगु:
बर्खामा छालामा फंगल इन्फेक्सन हुनु सामान्य हो । काखी तथा औँलाको कापमा ढुसीको संक्रमणका कारण घाउ बन्दछन् । यी ठाउँमा स्वच्छ हावा प्रवाह हुन सक्दैन र चिस्यान पनि रहिरहन्छ । जसका कराण ती ठाउँमा ढुसीको संक्रमण हुन्छ र घाउ बन्दछ । त्यसैले ढुसीको संक्रमणबाट बच्नका लागि काखी, जाँघ तथा औँलाको काम जस्ता ठाउँहरुलाई सुख्खा राख्ने, सफाइ गरिहरने तथा जिवाणु तथा ढुसीको संक्रमण रोक्न विभिन्न खाले क्रिम तथा औषधि दल्ने गर्नुपर्छ ।
जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन कार्यविधि र स्वास्थ्य सेवामा पर्न सक्ने प्रभाव
के तपाईंको आँखा तिरमिराउने समस्या छ ? हेलचेक्र्याइँ नगर्नुस्
Copyright © Janaswasthya Khabar. All right reserved.